IPhone 7 ayaa si cajiiba loogu dhawaaqay video cusub | Waxaan ka socdaa mac
IPhone 7 ayaa si cajiib ah loogu dhawaaqay fiidiyow cusub
Sida arday suuq geyn iyo xayeysiis ah, waxaan si gaar ah ugu fiirsadaa waxyaabahaas. Istaraatijiyadaha suuqgeynta Apple iyo qorshayaashiisa ayaa tusaale u ah in aysan raacin shirkadaha tikniyoolajiyadda oo keliya, laakiin ay cid walba raacdo. Xayeysiintooda iyo ololahooda xayeysiinta ayaa ka mid ah kuwa ugu caansan waxayna marwalba naga yaabaan jiil kasta oo cusub iyo wax soo saar kasta oo cusub. Ma ahan wax yar oo la socda iPhone 7. Marka hore ololaha "Lagu sameeyay iPhone 6" Kadibna "Waxa kaliya ee isbeddelaa waa wax walba", haddana wuxuu si xarrago leh u yimaadaa "The 7".
Ku raaxayso xayeysiintan cusub ee gaaban, laakiin xoogga leh, oo muuqaal ahaan qurux badan. Tufaaxa ayaa xirta madow si uu noo cajab galiyo. Midabkan cusub iyo dhalaalka dhalaalaya waxay ku tuuri karaan isla jirka aluminiumka hal sano oo dheeri ah iyaga oo aan dhibsan.
IPhone 7 wuxuu u ekaan doonaa sidan TV-ga
Qiyaastii 30 sekan. Waqti sax ah oo loogu talagalay xayeysiinta loogu talagalay inay ka muuqato YouTube, Instagram, shabakadaha bulshada iyo dabcan telefishanka. Apple wuxuu ku sii soconayaa fiidiyoow cajiib ah. Asalka madow, waa mid caadi ah midabka madow ee dhalaalaya, taas oo ah tan ugu xiisaha badan ugub muuqaal ahaaneed. Mugdiga ayaa ka soo baxaya sawirka iPhone 7 iyo 7 oo lagu daray.
Wax badan lagama sheegin qeexitaankiisa iyo sifooyinkiisa. Qofka doonaya inuu ogaado iyaga waa inuu eegaa qoraaladeenna ama uu ka raadsadaa macluumaad bogga internetka ee Apple. Xayeysiisyadu waa inay soo jiitaan dareenka oo jeclaadaan macaamilka, ee aan la ogeysiin. Aniga oo aan sii amba-qaadin oo aan ku lug yeelan, waxaan kuu dhaafayaa fiidiyowga su'aasha laga qabo.
Waxaan jeclahay xayeysiiska Apple. Waxay iila muuqdaan kuwo weyn, laakiin waa inaan dhahaa taas sanadkaan wey dhaafeen. Inbadan oo cadaan ah iyo iftiin aad u fara badan ayaan u gudubnay qaab mugdi iyo dhalaal leh. Ogeysiiskan iyo inbadan oo kale waxay ku qancin doonaan isticmaalayaasha inay cusbooneysiiyaan taleefannadooda. Iyadoo Samsung Galaxy Note 7 sawirka ka baxsan, guuleystaha dagaalka ayaa noqon doona Apple markale. Guul darrooyinka iPhone 6s lama soo celin doono, sannadkan ama sannadka dambe.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » iPhone » IPhone 7 ayaa si cajiib ah loogu dhawaaqay fiidiyow cusub
macruufka 10: Habee habka furitaanka. Maya badhanka guriga.
Michael Fassbender wuxuu tixgeliyey jabinta gacan si uu uga fogaado inuu ku jilo filimka Steve Jobs